राप्ती नगरपालिकाका वडाध्यक्ष तामाङको मृत्यु
चितवन, १० असार – पू्र्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष हितबहादुर योञ्जन तामाङको निधन भएको
चितवन, १० असार – पू्र्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष हितबहादुर योञ्जन तामाङको निधन भएको छ । उहाँको ४९ वर्षको उमेरमा मकवानपुरको भिमफेदीमा निधन भएको कान्छा छोरा हरि तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
लामो समय देखि अल्सरको उपचार गर्दै आउनुभएका तामाङको पछिल्लो समय कलेजोले काम गर्न छाडेको थियो । समस्या जटिल भएपछि उहाँलाई अस्पतालले घरमा नै आराम गर्न भनी पठाएको नगरपालिका प्रमुख प्रभा बरालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तामाङको निधन आज दिउँसो ४ बजे भएको हो ।
उहाँलाई केही दिनअघि आयुर्वेदिक उपचारका लागि मकवानपुरको भीमफेदी लगिएको थियो । उपचारका क्रममा तामाङको निधन भएको हो । नगरसभा सकिने समयमा उहाँको निधन भएको खबर आएको प्रमुख बरालले बताउनुभयो । तामाङ विसं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँको एक श्रीमती, दुई छोरा र दुई छोरी छन् ।(रासस)
महिला हिंसा एमसीसी र भ्रष्टाचार विरुद्ध राप्रपा निकट महिला संगठनको विरोध प्रदर्शन
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठन (राप्रमसं) ले महिला हिंसा,
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठन (राप्रमसं) ले महिला हिंसा, एमसीसी र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
एमसीसी चाहिदैन, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर, महिला हिंसाको अन्त्य गर, महिलामैत्री क्वारेन्टिन र बलात्कारीलाई सजायको माग गर्दै बुधबार माइतीघरबाट सुरू भएको विरोध र्याली बानेश्वरमा पुगेर सम्पन्न भएको थियो ।
राप्रमंसको कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै महिला नेतृ विजयकला राईले, लोकतन्त्रको नाममा राष्ट्रघाती काम हुन लागेको भन्दै सरकारको खरो आलोचना गरे । कोरोना महामारी विरूद्ध सरकारी व्यवस्थापन कमजोर रहेको टिप्पणी गर्दै, क्वारेन्टिनमा महिला बलात्कृत हुँदा सरकार टुलुटुल हेरेर बसेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
काठमाडौं-बलिउड कलाकार सुशान्तसिंह राजपूतको निधनपछि प्रहरीले प्रारम्भिक छानविनमाा यसलाई आत्महत्या भनेको थियो। प्रहरीले सुशान्तको मृत्युबारे
काठमाडौं-बलिउड कलाकार सुशान्तसिंह राजपूतको निधनपछि प्रहरीले प्रारम्भिक छानविनमाा यसलाई आत्महत्या भनेको थियो।
प्रहरीले सुशान्तको मृत्युबारे फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरेको छ।
आजतकका अनुसार सुशान्तले फासी लगाएका थिए र श्वास रोकिएपछि उनको मृत्यु भएको प्रहरी रिपोर्टमा उल्लेख छ।
रिपोर्टमा सुशान्तको शरीरमा कुनै किसिमको बाहिरी चोट पटक नभएको उल्लेख गरिएको छ।
रिपोर्टमा उनको मृत्युबारे कुनै पनि आंशकासहित प्रश्न गरिएको छैन्।
कांग्रेस सभापति देउवाले भने, ‘विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन हुने, पुरुषलाई नहुने?’
१० असार, काठमाडौंः नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई पनि नगरिकताको व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर
१० असार, काठमाडौंः नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई पनि नगरिकताको व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बताएका छन् । सरकारले नागरिकता दिँदा नेपाली महिला र पुरुषबिचमा विभेद गर्न नहुने भएकाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई जस्तै नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने देउवाले माग राखेका छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले चाहिँ नागरिकता पाउने? तर, पुरुषले नपाउने?’, देउवाले लेखेका छन्,, ‘महिला र पुरुषमा यसरी सरकारले विभेदको सिर्जना गर्नु कदापी पनि उचित छैन् ।’ उनले महिला र पुरुषको विचमा विभेद गरिनु नहुने बताएका छन् ।
महिलालाई दोसो दर्जाको नागरिक बनाउने गरि ल्याईएको नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानलाई थप संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् । उनी लेख्छन, ‘महिला र पुरुष बिचमा विभेद नहुने गरि नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानको निर्माण हुनुपर्छ । समानताको अवधाराणा र मर्म अनुरुप नागरिकता विधेयक अधि बढाउन म सत्तरुढ नेकपासँग माग गर्दछु ।’
पोखरा महानगरपालिकाको आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक, चालु वर्षको भन्दा १ अर्ब कम
१० असार, काठमाडौंः पोखरा महानगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरद्वारा
१० असार, काठमाडौंः पोखरा महानगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरद्वारा सार्वजनिक गरिएको बजेट ६ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ७८ हजार रुपैंयाँ रहेको छ । अहिलेको आर्थिक वर्षकोभन्दा यो बजेट १ अर्ब कम रहेको छ ।
पोखरा नगरसभामा पोखरा महानरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ्गले बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । महानगरको अनुमानअनुसार संघीय सरकारबाट २ अर्ब ५२ करोड ६० लाख रुपैयाँ र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ गरी कुल अन्तर सहकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने अनुमान गरिएको छ । अनुमानको रकममा २ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ६६ हजार प्राप्त गर्ने पोखरा महानगरपालिकाले अनुमान गरेको छ ।
PARIS, June 24, – Orly airport south of Paris is to reopen Friday after shutting
PARIS, June 24, – Orly airport south of Paris is to reopen Friday after shutting down on March 31 amid the coronavirus pandemic, but with justafraction of its normal flights.A plane to Porto, Portugal is scheduled to take off at 6:00 am (0400 GMT), and around 25 destinations are to be served via 70 takeoffs and landings, compared with 600aday before the virus crisis grounded aircraft worldwide.
Airlines including Air France, Transavia, easyJet, Vueling and Air Caraïbes account for most of the traffic at Orly, flying to the Caribbean, Reunion Island, Italy, Spain, Portugal, Iceland and Croatia, among others.On Friday, officials expect around 8,000 passengers to pass through Orly’s four terminals, less than 10 percent of the daily average of around 90,000.
“We are facing an extremely brutal and long crisis, and we are bracing foraresumption that will be somewhat long, if not extremely long,” Alain Battisti, head of France’s national federation of commercial aviation (Fnam) said Tuesday.(AFP)
प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको विशेष रोजगार आयोजनाको उद्घाटन गर्ने
लखनउ, उत्तर प्रदेश १० असार- भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत सरकारले शुरु गर्न लागेको विशेष
लखनउ, उत्तर प्रदेश १० असार- भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत सरकारले शुरु गर्न लागेको विशेष रोजगार आयोजनाको यही जुन २६ मा उद्घाटन गर्नुहुने भएको छ । भारत सरकारले सो आयोजना कोभिड १९ पछिको अवस्थामा यहाँका कम्तीमा पनि १ करोड २५ लाख मानिसलाई रोजगारी दिने योजनाअनुरुप शुरु गर्न लागेको हो ।
‘विशेष रोजगार आयोजना’ नाम दिइएको यस आयोजनाबाट भारतको सरकारले यहाँका महिला र पुरुषगरी १ करोड २५ लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने बताइएको छ ।यही जुन २६ मा प्रधानमन्त्री मोदीले भर्चुअल माध्यमबाटै उद्घाटन गर्न लाग्नुभएको जनाइएको छ ।
यो आयोजना भारतको उत्तर प्रदेशका विशेषगरी छ ओटा जिल्लाका लागि लक्ष्य गरिएको छ । उक्त आयोजनाको उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री मोदीले यस आयोजनाबाट लाभ लिन लागेका ती जिल्लाका केही स्थानीय नागरिकहरुसँग पनि कुराकानी गर्नुहुने बताइएको छ ।
गोरखपुर लगायतका छ जिल्लाका जनताले यो आयोजनाबाट रोजगारी पाउने भएका हुन् । सो आयोजनाको उद्घाटनपछि उहाँले ती जिल्लाका महिला र पुरुषसँग अन्तक्र्रिया गर्नुहुने बताइएको छ । यो आयोजनालाई भारतको सबैभन्दा ठूलो रोजगार आयोजनाका रुपमा लिइएको छ । यस आयोजनाको सञ्चालनबाट उत्तर प्रदेशमा विभिन्न सीप विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले जानकारी दिनुभयो ।तर उत्तर प्रदेशमा यति धेरै मानिसलाई रोजगारी दिने भनी भारतको सरकारले प्रचार गरेको यस कार्यक्रमप्रति भारतका विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलहरुले भने विश्वास गरेका छैनन् । एएनआई
अब फोहर गर्ने व्यक्तिको विवरण दिनेलाई पुरस्कार
दाङ- लमहीकाे तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले फोहर गर्ने व्यक्तिको विवरण दिनेलाई पुरस्कार दिने नीति ल्याएको छ। उपमहानगरपालिकाको
दाङ- लमहीकाे तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले फोहर गर्ने व्यक्तिको विवरण दिनेलाई पुरस्कार दिने नीति ल्याएको छ। उपमहानगरपालिकाको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा फोहर गर्ने व्यक्तिको तस्वीर र भिडियोसहितको विवरण राखी जानकारी दिने व्यक्ति वा संस्थालाई पुरस्कार प्रदान गरिने उल्लेख छ।
जथाभाबी फोहर फाल्दा बजारको फोहर बाढीले बगाएर किसानको खेतबारीमा पु¥याउँदा खेती गर्न समस्या हुने र उत्पादन घट्ने समस्या देखिएपछि नगरपालिकाले यस्तो नीति बनाएको नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए।
त्यस्तै फोहोर गर्ने व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाही गरिनाका साथै फोहोर गर्नेले मोहर तिर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा लागु गरिने छ। टोल विकास संस्थालाई आफ्नो टोल आफँै सफा राखाँै अभियानमा सहभागी गराउँदै ग्रिन तुलसीपुर, क्लिन तुलसीपुर अभियानलाई नगरका सबै क्षेत्रमा विस्तार गरिने तथा बेवारिसे लाश र मरेका चौपायाको तत्काल व्यवस्थापन गरिने नीति सार्वजनिक गरिएको छ।
फोहोर मैला संकलन तथा सरसफाइमा खट्ने कर्मचारीको स्वास्थ्य परीक्षणलगायत अन्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाइने र सरसफाइ तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा टोल विकास संस्था, निजी क्षेत्र सहकारी र समुदायबीच सहकार्य गरिनेछ। त्यसैगरी स्थायी ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। बजारमा प्लाष्टिक झोलामा कडाइ गरेको उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र २० माइक्रोनभन्दा कमको प्लाटिक झोला प्रयोगमा निषेध गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ।
बूढीगङ्गामा जीप दुर्घटना हुँदा १४ जना घाइते, दुईको अवस्था गम्भीर
बाजुरा, १० असार – बूढीगङ्गा नगरपालिकाको फालासैन बजारमा जीप दुर्घटना हुँदा १४ जना घाइते भएका
बाजुरा, १० असार – बूढीगङ्गा नगरपालिकाको फालासैन बजारमा जीप दुर्घटना हुँदा १४ जना घाइते भएका छन् । से १ ज १०१९ नंको जीप फालाशैन बजारबाट सेराबजार आउन लागेको समयमा दुर्घटना हुँदा चालकसहित १४ जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।
तीमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेकाले थप उपचारका लागि अछामको बयालपाटा अस्पतालमा सिफारिश गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक टंकप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । अन्य सामान्य घाइते १२ जनाको स्थानीयस्तरमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ ।(रासस)
चीनले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता
काठमाडौैं- चीनले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको
काठमाडौैं- चीनले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका तीन जना सांसदले बुधबार कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरि अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
कांग्रेस सांसदहरु देवेन्द्रराज कँडेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल र सज्यकुमार गौतमले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा अतिक्रमणमा परेका भूभागबारे सत्यतथ्य संसदलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिन समेत माग गरिएको छ।
भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा विवाद चलिरहेका बेला चीनले पनि नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको तथ्य खुलेको छ।
५ हिमाली जिल्लाको करिब १ हजार ४ सय ५६ रोपनी तथा गोरखा र दार्चुलाका एक–एक नेपाली गाउँ चीनले अतिक्रमण गरेको पाइएको हो।
संवैधानिक तथा सरकारी निकायका प्रतिवेदनले दोलखाको उत्तरी भेगको ९९ रोपनी तथा हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासभा र रसुवाको ६४ हेक्टर नेपाली भूभाग वर्षौंदेखि चिनियाँ अतिक्रमणमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
गोरखा र दार्चुलाका नेपाली गाउँको भने मापन नभएकाले कति क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको भनेर प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन
नापी विभागका अधिकारीका अनुसार दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ को कोर्लाङ क्षेत्रमा रहेको ५७ नम्बरको सीमास्तम्भलाई साविक स्थान ९कोर्लाङ क्षेत्रको टुप्पो० को सट्टा फेदमा करिब १५ सय मिटर नेपालतर्फ राखिएकाले यताको करिब ९९ रोपनी भूभाग चीनतर्फ परेको छ ।
कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार चीनले अन्य चार जिल्लाका ११ ठाउँमा नेपाली भूमि मिचेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार हुम्लाको भागदारे खोलामा ६ हेक्टर, कर्णाली नदीमा ४ हेक्टर, रसुवाको सान्जेन खोलामा २ हेक्टर, भुर्जुग खोलामा १ हेक्टर, जम्बु खोलामा ३ हेक्टर, सिन्धुपाल्चोकको खराने खोलामा ७ हेक्टर, भोटेकोसीमा ४ हेक्टर, संखुवासभा सुमजुग खोलामा ३ हेक्टर, कामखोलामा २ हेक्टर र अरुण खोलामा ४ हेक्टर चीनको अतिक्रमणमा परेका छन् ।
रसुवाको लेम्दे खोलामा समेत केही भूभाग चीनको अतिक्रमणमा परेको छ तर कति भूमि भनेर कषि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छैन।
पशुपतिनाथको मूल मन्दिर क्षेत्रमा मर्मतसम्भार जारी,भक्तजन प्रवेश गराउन विशेष तयारी
काठमाडौँ, १० असार- कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले बन्दाबन्दी लागू गरिएपछि बन्द
काठमाडौँ, १० असार- कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले बन्दाबन्दी लागू गरिएपछि बन्द गरिएको पशुपतिनाथको मूल मन्दिर क्षेत्रभित्र मर्मतसम्भार शुरु गरिएको छ । मूल मन्दिरभित्र छापिएको ढुङ्गा हल्लिएकाले खाली भएका बेला निकालेर मर्मतसम्भार शुरु गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । हल्लिएका ढुङ्गा निकालेर पुटिङ भर्ने काम भइरहेको छ ।
मूल मन्दिरभित्रको चन्दन घोट्ने घर जीर्ण भएकाले भत्काइएको छ । चन्दन घोट्न र भण्डारी सुत्नका लागि महेन्द्र सहारा सत्तल प्रयोगमा ल्याइएको पनि उहाँले बताउनुभयो । चन्दन घोट्ने घरसँगैको भान्छा घर गत वर्ष नै भत्काएर पुनःनिर्माण भइरहेको छ । यी संरचना विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले जीर्ण भएका थिए ।
भूकम्पले क्षति पुगेका पशुपतिका ९० वटा संरचनामध्ये ४२ वटाको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको कोषका निर्देशक भरत मरासिनीले जानकारी दिनुभयो । भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले काम शुरु गरेको पाँच वर्षमा पुरातात्विक महत्वका सबै संरचना बनाइसक्ने प्रतिबद्धता गरे पनि पशुपति क्षेत्रका ६० वटासम्मको पुनःनिर्माण सकिने भएको कोषले जनाएको छ ।
पशुपतिनाथ मूल मन्दिरमा बन्दाबन्दी शुरु भएदेखि नै भक्तजनलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । असार १ गतेदेखि बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाइए पनि मठमन्दिर, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक यातायात भने खोलिएको छैन । सरकारले मठ मन्दिरलाई खुला गरेपछि भक्तजनलाई सुरक्षित तरिकाले दर्शन गराएर फर्काउनका लागि कार्यविधि बनाएर तयारी थालिएको पनि कार्यकारी निर्देशक खतिवडाले जानकारी गराउनुभयो ।
असार १ गतेदेखि पशुपति क्षेत्रको सरसफाइका लागि सफाइकर्मीलाई विशेषरुपमा परिचालनसमेत गरिएको छ । चैत ११ गतेदेखि जारी बन्दाबन्दीका क्रममा पशुपति क्षेत्रको सबैतिर सफाइ हुन नसकेको गुनासो स्थानीयवासीबाट आएको थियो । (रासस)
अर्थ मन्त्रालयमा आज विश्व बैंकसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौँ – विश्व बैंकले नेपालको ऊर्जा विकाससँगै कोभिड–१९ को सङ्कट व्यवस्थापनका लागि १० करोड डलर
काठमाडौँ – विश्व बैंकले नेपालको ऊर्जा विकाससँगै कोभिड–१९ को सङ्कट व्यवस्थापनका लागि १० करोड डलर बराबरको आर्थिक सहायता दिने भएको छ ।अर्थ मन्त्रालयमा आज विश्व बैंकसँग विकास नीति ऋण सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका नेपालस्थित देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
सहयोग रकम नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सम्भाव्यतालाई पहिल्याउन नीतिगत र संस्थागत सुधारमा खर्च गरिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । यो सहयोगअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वित्तीयरुपमा सबल बनाउने, स्वायत्त, पारदर्शी र जवाफदेही नियमनकारी निकाय खडा गर्ने, ऊर्जाको क्षेत्रीय बजारमा हिस्सा अभिवृद्धि गर्ने र सङ्घीय ढाँचाअनुरुप प्राधिकरणको प्रादेशिक र स्थानीय तहमा संरचना खडा गर्ने काम हुनेछ ।
उहाँले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई भरपर्दो र दिगो बनाउने तथा गरिबी निवारण र मुलुकको समृद्धिमा समेत सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालसँगको ५०औँ वर्षसम्मको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै सहयोग गर्न पाएकामा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । कोभिड–१९ का समयमा दीर्घकालीन योजना सम्पन्न गर्न पनि सघाउने उहाँले आशा व्यक्त गर्नुभयो । रासस
थप सेवाका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै टीकापुर अस्पताल
भजनी, १० असार- संरचनागत रुपले हेर्दा टीकापुर अस्पताल सुविधासम्पन्न भए पनि आवश्यक जनशक्ति अस्पतालमा हुन
भजनी, १० असार- संरचनागत रुपले हेर्दा टीकापुर अस्पताल सुविधासम्पन्न भए पनि आवश्यक जनशक्ति अस्पतालमा हुन नसक्दा अझै ती संरचनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अस्पतालमा हाल सात विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् । टीकापुर नगरपालिकाले अस्पतालमा दुई विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सेवासुविधा दिएर राखेको छ भने बाँकी चार चिकित्सक दरबन्दीअनुसार अस्पतालमा कार्यरत छन् ।
केही महिनादेखि अस्पतालले सेवाग्राहीको सेवा प्रवाहलगायत प्रशासनिक कामलाई प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्दै गइरहेकामा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि थप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने गरी स्थानीय तहसँग समन्वय शुरु गरेको छ ।
टीकापुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष दीपक रावलले कैलालीका पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने महुन्याल, जानकी र जोशीपुुर गाउँपालिका, टीकापुर र भजनी नगरपालिकालाई अस्पतालमा थप विशेषज्ञ सेवा थप्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको छ । उहाँले एक स्थानीय तहले एक विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवासुविधा दिन सके स्थानीयवासीले सामान्य बिरामी हुँदा पनि धनगढी, नेपालगञ्जसम्म जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने बताउनुभयो । अध्यक्ष रावलले पाँच स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाएउनुभएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षमा एक स्थानीय तह, एक विशेषज्ञ चिकित्सक व्यवस्थापन हुने गरी स्थानीय तहलाई बजेटको व्यवस्थापन गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
‘अस्पतालको पूँजीले मात्र विशेषज्ञ चिकित्सक व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले पनि दरबन्दीअनुसारको चिकित्सक व्यवस्थापन गर्न सक्ने देखिँदैन’, ध्यक्ष रावलले भन्नुभयो, ‘यहाँका स्थानीय तहको मुख्य स्वास्थ्य सेवा लिने केन्द्र टीकापुर अस्पताल नै हो । स्थानीय तहले अस्पतालभन्दा पनि विशेषज्ञ चिकित्सकलाई स्थानीय तहबाटै तलबभत्ता दिने गरी अस्पतालसँग समन्वयका लागि आग्रह गरेका छौंँ ।’
टीकापुर नगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षमा एकएक बाल विशेषज्ञ र स्त्रीरोग विशेषज्ञलाई अस्पतालमा निरन्तरता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिसकेको छ ।
जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्पतालका लागि विशेषज्ञ सेवा विस्तार हुने गरी बजेट विनियोजन गरिने जानकारी दिनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आउँदो आवमा टीकापुर अस्पताललाई सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने गरी रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । हाल अस्पतालमा दुईदुई बालरोग र स्त्रीरोग विशेषज्ञ तथा एकएक एबिबिपी, फिजिशियन र डेन्टल सर्जन कार्यरत छन् । (रासस)
बिमल रायः यस्ता भारतीय निर्देशक जसले बलिवुडमा मात्रै होईन, हलिवुडमा पनि प्रभाव जमाए
अमि प्रिन्स १० असार, काठमाडौंः सन् १९५३ मा प्रदर्शनमा आएको भारतीय चलचित्र ‘दो बिघा जमीन’ले
१० असार, काठमाडौंः सन् १९५३ मा प्रदर्शनमा आएको भारतीय चलचित्र ‘दो बिघा जमीन’ले संसारभरका फिल्म निर्देशकको ध्यान तान्यो । पहिलोपटक भारतीय चलचित्र क्षेत्रमा ‘निओ–रिअलिजम’लाई सोही चलचित्रबाट प्रस्तुत गरिएको नियो । ‘निओ–रिअलिजम’ अर्थात् ‘नव–यथार्थवाद’ भारतीय सिने क्षेत्रमा प्रयोग गरी विमल रायले बलिउड चलचित्रलाई नयाँ बाटो देखाएका थिए ।
दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा फाँसीवादका कारण इटलीको समाजमा निकै भयावय स्थिति थियो । मुसोलिनीको डरले सबैजसो फिल्म निर्देशकले सामान्य काम मात्र गरिरहेका थिए । त्यस्तो समयमा रोबर्ट रोसेलिनी, बित्तोरियो डि सिका, विस्कोन्तीलगायतका केही फिल्म निर्देशकले समाजमा बढिरहेको वर्गसंघर्षको विषयलाई पनि आफ्नो फिल्मको विषय बनाइरहेका थिए । ‘निओ–रिअलिजम’लाई प्रयोग गरेर शोषित र शासकबीचको द्वन्द्वलाई देखाउने गरिएको थियो । जुन द्वन्द्व मेक्सिम गोर्कीको उपन्यास ‘आमा’ वा अप्टन सिक्लैरको ‘जंगल’मा प्रयोग गरिएको थियो ।
भारतको परिपे्रक्षमा भने नव–यथार्थवादको संघर्षलाई पहिलोपटक विमल रायले भित्राए । रायको चलचित्र ‘उदेर पाथेय’ (सन् १९४४, बंगाली भाषामा) मा नव–यथार्थवादको विषय समेटिएको थियो । यसले बंगाली सिने क्षेत्रमा तुफान ल्याइदियो । स्वभावले शान्त रहने विमल रायलाई फिल्म पत्रकार बुर्जोर खुर्सिदजी करजियाँले ‘साइलेन्ट थन्डर’को उपनाम दिए ।
विमल रायले निर्माता तथा निर्देशक बिएन सरकारको साथ पाएर न्यु थिएटर (कलकत्ता)बाट क्यामराम्यानको रूपमा फिल्मी यात्रा सुरु गरेका हुन् । त्यो समयमा हिन्दी चलचित्रमा बंगाली प्रभाव बढिरहेको थियो । विमल रायका साथी हितेन चौधरीले अभिनेता अशोक कुमारसँग मिलेर ‘बेम्बो टाकीज’ निर्माण कम्पनीका लागि चलचित्र निर्देशन गर्न रायलाई मौका जुराइदिएका थिए । बेम्बो टाकीजको स्थापना देविका रानीका पति हिमांशु राय तथा संतीतकार मदन मोहनका पिता रायबहादुर चुन्नीलालले गरेका थिए । विमलले बेम्बो टाकीजका लागि ‘मा’ (सन् १९५२) को निर्देशन गरे, जुन अमेरिकी चलचित्र ‘ओवर द हिल्स’बाट प्रभावित थियो ।
विगतमा बनाएका चलचित्रको तुलनामा विमलको फिल्म निकै चर्चित भयो । पछि अशोक कुमारको प्रस्तावमा रायले अशोककै निर्माण कम्पनी ‘फिल्मीस्तान’का लागि ‘परिणीता’ (सन् १९५३) निर्देशन गरेका थिए ।
आफूले बनाएका चलचित्रले सफलता पाएपछि रायले ‘विमल राय प्रोडक्सन्स’का नाममा आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गरे । आफ्नै निर्माण कम्पनीबाट ‘दो बिघा जमीन’ बनाए । सो फिल्म बन्नुमा ऋषिकेश मुखर्जी पनि मुख्य कारण थिए ।
सन् १९५२ मा मुम्बईमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा ‘बायसाइकिल थिब्स’ र ‘रोसोमन’जस्ता चलचित्र प्रदर्शन गरिएका थिए । जुन फिल्मको प्रभावबाट धेरैजसो भारतीय निर्देशक चकित भएका थिए । फर्किंदै गर्दा ऋषिकेश मुखर्जीले रायलाई बलिउडमा किन यस्तो फिल्म नबनेको भन्ने प्रश्न गरेका थिए । रायले कथा नभएको बताउँदा ऋषिले आफूसँग ‘रिक्सावाला’ नाममा कथा भएको बताएका थिए । तर, उक्त कथा केही पाना मात्र थियो । जसलाई ऋषिले २४ पानाको स्क्रिप्टमा रूपान्तरण गरेर रायलाई फिल्म बनाउन बाध्य गराएका थिए ।
दोस्रो विश्वयुद्धको पृष्ठभूमिमा भिक्टोरियो डी सिकाको चलचित्र ‘बायसाइकल थिब्स’मा बाबु र छोराको कथा छ, जसमा आफ्नो साइकल चोरी भएपछि उनीहरू खोजीमा निस्किएका हुन्छन् । साइकल नभेटिँदा बाबुले काम गर्न पाउँदैन, जसले परिवारमा संकट आउँथ्यो । विमलको चलचित्र ‘दो बिघा जमीन’मा पनि बाबुछोरा कलकत्ता आएर आफ्नो गाउँको दुई बिघा जमिन बचाउनलाई रिक्सा चलाउने गरेका हुन्छन् । यी दुवै चलचित्रमा बाबुको हार भएको हुन्छ ।
निर्देशक रायको सम्मानमा भारत सरकारले निकालेको हुलाक टिकट
विमल रायको चलचित्रप्रतिको सोचलाई बुझ्न ‘दो बिघा जमीन’सँग जोडिएको किस्सा पनि जान्न जरुरी हुन्छ । बेम्बो टाकीजका मालिक यस फिल्मका कलाकार छान्ने काममा सन्तुष्ट थिएनन् । उनका अनुसार पन्जाबसँग सम्बन्ध राख्ने बलराज साहनी निकै गोरा थिए । अर्कातिर त्यो समयकी नायिका निरुया रायले फिल्ममा देवीको भूमिका मात्र निभाउने गरेकी थिइन् । दुवैलाई ग्रामीण परिवेशमा फिट गर्न सहज थिएन । तर, रायले भने आफ्नो अडान उनीहरूलाई नै अभिनय गराउनेमा राखेका थिए ।
बलराज साहनी समाजवादी विचारधाराबाट प्रभावित थिए । चलचित्रमा पनि सर्वहाराको जिन्दगीलाई देखाइएको थियो । रायका अनुसार बलराज उक्त भूमिकाका लागि उपयुक्त थिए । तर, कमर्सियल फिल्म बनाउने दबाब पनि रायमाथि थियो । उनमा भएको एउटा गुण बक्स अफिसलाई ध्यानमा राख्दै आफूलाई मन लागेको विषयमा फिल्म बनाउनु थियो ।
‘नोकरी’ ९सन् १९५४०, तथा ‘मधुमती’ (सन् १९५८) यसका नतिजा थिए । ‘मधुमती’ बेम्बो टाकीजको प्रोडक्सनमा बनेको चलचित्र ‘महल’ (सन् १९४९) बाट प्रभावित थियो । पुनर्जन्मको विषयमा बनेको फिल्म ‘मधुमती’ भारतीय मात्र नभएर हलिउडलाई पनि निकै प्रभाव पार्ने चलचित्र थियो । जसको प्रभावकै कारण हलिउडमा ‘द रि–इन्कार्नेसन अफ पिटर प्राउड’ बनेको थियो ।
आगा हश्र कश्मिरीद्वारा लिखित कहानी ‘यहुदी की लडकी’बाट प्रेरित भएर रायले ‘यहुदी’ बनाएका थिए । जातभात तथा छुवाछूतको विषयमा ‘सुजाता’ ९सन् १९५९’, लोकतन्त्रको विषयमा ‘परख’ (सन् १९६०) तथा महिलाको विषयमा बनेको चलचित्र ‘बंदिनी’ (सन् १९६३), लगायतका सबैजसो चलचित्रले रायको चलचित्रप्रतिको गुण प्रस्तुत गरेका देखिन्छन् ।
शरदचन्द्रको साहित्यबाट निकै प्रभावित रहेका विमल रायले उनको कथामाथि तीनवटा चलचित्र निर्माण गरे । ‘देवदास’, ‘परिणीता’, तथा ‘बिराज बहू’लाई शरदचन्द्रकै कथामा आधारित भएर बनाएका चलचित्र मानिन्छन् । विभिन्न चलचित्र समीक्षकका अनुसार रायले बनाएको चलचित्र ‘देवदास’ शरदचन्द्रको कथाको सबैभन्दा नजिक रहेर बनाइएको फिल्म थियो ।
फिल्मी क्षेत्रमा निकै योगदान गरेका रायले हिन्दी कला क्षेत्रलाई ऋषिकेश मुखर्जी, ऋत्विक घटक, कमल बोस, नेबेन्दु घोष, रघुनाथ झालानी तथा गुलजारजस्ता नयाँ पुस्तालाई पनि उत्पादन गरेका थिए ।
क्यामराम्यानको रूपमा चलचित्र क्षेत्रमा छिरेका विमलको क्यामराप्रतिको मोह र प्रकाशको ज्ञानकै कारण चलचित्र निर्देशनमा आएको श्याम बेनेगलले एक अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । बेनेगलका अनुसार रायमा भएको फोटोग्राफीको ज्ञान र प्रकाशको प्रभावलाई बुझ्न सक्ने क्षमताकै कारण उनले निकै कलात्मक तथा अतुलनीय चलचित्र निर्देशन गरेका हुन् ।
भारतीय चलचित्र क्षेत्रमा सत्यजित रे पछिका महान् फिल्म निर्देशको रूपमा रायलाई लिने गरिन्छ । सत्यजित रेको अगाडि कमर्सियल चलचित्र बनाउने दबाब नभएको कारण पनि उनका चलचित्रलाई निकै कलात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिएको छ । तर, रायको सन्दर्भमा भने त्यो लागू भएको थिएन । उनलाई आफ्नो इच्छाअनुसारको चलचित्र बनाउनु पनि थियो र चलचित्र कमर्सियल पनि हुनु थियो । जसकारण कलात्मक चलचित्रमा मात्र उनले ‘फोकस’ गर्न नसकेको मानिन्छ ।
तर, अचम्मको कुरा के छ भने भारतीय सिने क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान र निकै कलात्मक चलचित्र दिएका तथा नव–यथार्थवादलाई पहिलोपटक प्रयोग गरेका विमललाई हिन्दी भाषाको ज्ञान भने थिएन ।
कोरोनाका कारण प्रदेश नं ५ का स्थानीय तहका प्राथमिकता फेरिए
रुपन्देही, १० असार – कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण प्रदेश नं ५ का स्थानीय तहका प्राथमिकता
रुपन्देही, १० असार – कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण प्रदेश नं ५ का स्थानीय तहका प्राथमिकता फेरिएका छन् । प्रदेश नं ५ का अधिकांश स्थानीय तहले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति कार्यक्रम तथा बजेट बनाएका छन् ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरेको छ । सातौंँ नगरसभाको तेस्रो बैठकमा नगर उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले आज कोभिड–१९ बाट उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । रु एक अर्ब ८९ करोड २६ लाखको प्रस्तावित बजेटमा सामाजिक सुरक्षाको रु २५ करोडबाहेक चालुतर्फ ५२ करोड एक लाख अर्थात् ३१ दशमलव ६७ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु एक अर्ब १२ करोड २५ लाख अर्थात् ६८ दशमलव ३३ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा तिलोत्तमाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार रु ३५ करोडले बढाएको हो ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख चौधरीले क्रमागत आयोजनाको निर्माण पूरा गर्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने तथा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षामा लगानी बढाई नगरवासीमा परिवर्तनको अनुभूति गराउने विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । बजेटमाथि नगरसभाको अर्को बैठकमा दफाबार छलफल हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधवप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।
खुशी जनता, समृद्ध तुलसीपुर
तुलसीपुर –दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि करीब रु दुई अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख माया आचार्यले आज रु दुई अर्ब ३४ करोड ३७ लाख ६४ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पूँजीगततर्फ नगर, वडास्तरीय पूर्वाधार विकास र अन्य सशर्त कार्यक्रम तथा विकास कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब ६८ करोड ४७ लाख र चालुतर्फ ६६ करोड २० लाख ६४ हजार विनियोजन गर्नुभएको छ । पूँजीगतर्फ ७२ प्रतिशत र चालुतर्फ २८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको हो । उपप्रमुख आचार्यका अनुसार स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘खुशी जनता ः समृद्ध तुलसीपुर, हाम्रो तुलसीपुर ः राम्रो तुलसीपुर’ बनाउने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।
शिवराज ः कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता
चन्द्रौटा –कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । भएको सातौँ नगरसभामा आज नगरप्रमुख नेत्रराज अधिकारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई कृषि मार्फत रोजगारीको सिर्जना गरिने बताउनुभयो ।
नगरको अधिकांश जमीन उत्पादनमूलक रहेको र धान खेतीको प्रचूर सम्भावना भएकाले धान उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्यतर्फ नागरिकको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिई ८० वर्षमाथिका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच, मानसिक स्वास्थ्य समस्याको उपचार तथा रोकथामका लागि दुई स्थानमा मनोपरामर्श एकाइ , महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई रु पाँच लाखको दुर्घटना बीमा, ‘बच्चा जन्माउने कहाँ वर्थिङ सेन्टर जहाँ’ अभियान सञ्चालन गर्ने, वीरपुर स्वास्थ्यचौकीमा वर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम छ । कोरोना भाइरसको जोखिममा पनि अग्रमोर्चामा बसेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष ध्यान दिइने नगरप्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो ।(रासस)
बिहे गरेर आउने बित्तिकै बुहारीलाई नागरिकता दिनुपर्छ : जनता समाजवादी पार्टी
काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी नेपालले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकले आफ्नो मुलुकको नागरिकता परित्याग
काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी नेपालले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकले आफ्नो मुलुकको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाणका आधारमा नेपाली नागरिकता दिनुपर्नें बताएको छ।
नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा भएका प्रावधानको चर्को विरोध भइरहेका बेला जसपाको यस्तो धारणा आएको हो।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर आएको उक्त विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्न आउन विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाको कतिपयले विरोध गरिरहेका छन्।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि उक्त व्यवस्था ठिक भएको भन्दै त्यसलाई सर्मथन गरेको छ।
यसअघि नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकले आफ्नो मुलुकको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाणका आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो।
एकैदिन ११४ जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्किए
काठमाडौँ, १० असार – प्रवक्ता डा गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा थप ११४ जना उपचारपछि
काठमाडौँ, १० असार – प्रवक्ता डा गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा थप ११४ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । तीमध्ये आठ महिला र १०६ पुरुष छन् । योसँगै निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या दुई हजार १२४ पुगेको छ । तीमध्ये दुई हजार ३५ पुरुष र १८९ महिला छन् ।
आज डिस्चार्ज हुनेमा जलेश्वर अस्पताल महोत्तरीबाट एक महिला र १८ पुरुष, कोभिड–१९ अस्पताल सपही जनकपुरबाट २० पुरुष, सिन्धुली अस्पताल सिन्धुलीबाट तीन पुरुष रहेका छन् । यस्तै चितवनस्थित भरतपुर अस्पतालबाट नवलपरासी (पूर्व)का एक पुरुष र नवलपरासी (पश्चिम)का दुई पुरुष, चितवनका पाँच महिला र १३ पुरुष, कपिलवस्तुका एक महिला रहेका छन् ।
यसैगरी बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट झापाका चार पुरुष, मोरङका १८ पुरुष, सुनसरीका एक महिला र चार पुरुष तथा तेह्रथुमका एक पुरुष रहेका छन् । डिस्चार्ज हुनेमा दमौली अस्पताल तनहुँका एक पुरुष, धौलागिरि अस्पतला बाग्लुङका चार पुरुष, गोरखा अस्पताल गोरखाबाट एक पुरुष, जिपी कोइराला शुक्लागण्डकीबाट छ पुरुष र कालिका अस्पताल स्याङ्जाबाट १० पुरुष रहेका छन् ।(रासस)
कोरोनाले खस्काएको पर्यटनलाई उठाउन काठमाडौं महानगरपालिकाको यस्तो सहुलियत
१० असार, काठमाडौंः काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७ र २०७८ को बजेटमा कोरोना भाइरसको
१० असार, काठमाडौंः काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७ र २०७८ को बजेटमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मारमा परेको पर्यटन व्यवसायलाई उठाउन सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ । महानगरले ल्याएको बजेटमा प्राथमिक रुपमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई सहुलियत प्रदान गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएको सहुलियतमा होटल तथा पर्यटन व्यवसायीका लागि ८५ प्रतिशतसम्म कर छुट दिईएको । महानगरको घोषणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६ र ०७७ को सबै प्रकारका कर तिर्न ढिलो भएकाहरुलाई लाग्ने जरिवानामा पुरा छुट दिईएको छ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८मा पुस महिनासम्म सम्पत्ति दाखिला गराउनेहरुलाई पनि पूर्ण कर छुट दिईएको घोषणा महानगरले गरेको छ ।
महानगरले थप छुटको रुपमा पुस मशान्तसम्ममा कर बुझाउनेलाई १० प्रतिशत सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, होटल सञ्चालन गर्न आफ्नै घर प्रइोग गरिरहेका वा लिजमा लिएर होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेकाहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ मा तिर्नुपर्ने सम्पत्ति करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
यसरी काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न शिर्षकमा पर्यटन तथा होटल व्यावसायीलाई ८५ प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ ।
अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई तर्साउन सक्ने गरि आएको विधेयक नेकपाले रोक्ने
काठमाडौं-सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निजी क्षेत्रसमेत हेर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिने गरी
काठमाडौं-सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निजी क्षेत्रसमेत हेर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिने गरी आउन लागेको कानुन तत्काललाई रोक्ने भएको छ।
बुधबारदेखि सुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा उक्त विषयमा नेताहरुले विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभामा पेश भएको विधेयक अगाडि नबढाउने सहमति बनेको हो।
नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले संविधानभन्दा माथि राखेर अख्तियारलाई अधिकार दिन खोजिएको भन्दै तत्काल त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिइने सहमति भएको हो।
शुक्रबार पुनः बस्ने गरी नेकपा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित
काठमाडौं-सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको बैठक शुक्रबार पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको छ।
बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा दुई अध्यक्षले सम्बोधन गरेका थिए र बैठकका अजेण्डा तय भएका थिए।
दुई अध्यक्षले आफ्नो सम्बोधनमा कोभिड-१९ विरुद्ध सरकारले गरिरहेको काम र पार्टीको कामलगायत समसामयिक विषयमा बालेका थिए।
घरभाडा छुट दिने घरबेटीलाई महानगरले पनि छुट दिने
१० असार, काठमाडौंः काठमाडौं महानगरपालिकाले घरभाडा छुट दिने घरबेटीलाई एक महिनाको घर बहाल करमा छुट
१० असार, काठमाडौंः काठमाडौं महानगरपालिकाले घरभाडा छुट दिने घरबेटीलाई एक महिनाको घर बहाल करमा छुट दिने भएको छ ।
कोरोना भाईरसको कारण घर भाडामा बस्ने मानिसहरुलाई असर परेको भन्दै कम्तिमा एक महिनाको घरभाडा छुट दिने घरबेटीलाई महानगरले बहाल करमा छुट दिने निर्णय गरेको हो । घरभाडा छुट दिने घरबेटीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा बुझाउनु पर्ने घर बहाल करमा १० प्रतिशतले छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
महानगरको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिए अनुसार घर, जग्गा तथा सम्पती भाडामा लगाएबापत तिनुपर्ने बहालमा कम्तीमा एक महिनाको छुट दिएको भएमा महानगरलाई बुझाउनुपर्ने बहाल करको १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौंमा थपिए दुई जना कोरोना संक्रमित
१० असार, काठमाडौंः काठमाडौंमा थप दुई जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ ।
काठमाडौंमा थप दुई जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । बुधबार नेपालका विभिन्न ठाउँमा थपिएका ६ सय २९ कोरोना संक्रमितमध्ये दुई जना काठमाडौंका रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताएका हुन ।
नियमित पत्रकारसम्मेलनमा पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालभरगरि थप ६ सय ९ जामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बताएको थियो । थपिएका यीमध्ये दुई जना कोरोना संक्रमित काठमाडौंको रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका हुन् ।
बुधबार थपिएका कोरोना संक्रमितसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या १० हजार ७ सय २८ पुगेका छ । कोरोना संक्रमणका कारण हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या भने २४ रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
करिब चार सय नेपाली अमेरिकाबाट स्वदेश फर्कँदै
काठमाडौं-अमेरिकाबाट करिब चार सय नेपाली नेपाली स्वदेश फर्कँदै छन् । तीन महिनादेखि स्वदेश फर्कन नपाएका
काठमाडौं-अमेरिकाबाट करिब चार सय नेपाली नेपाली स्वदेश फर्कँदै छन् । तीन महिनादेखि स्वदेश फर्कन नपाएका उनीहरु स्वदेश फर्कन पाएपछि उनीहरु खुशी भएका छन् ।
टर्कीस एयरलाइन्सको विमानबाट उनीहरु स्वदेश फर्कन लागेका हुन् । र ३८१ जना नेपाली स्थानीय समय अनुसार बुधबार बिहान सवा १० बजे नेपालका लागि प्रस्थान गरेको बताइएको छ ।
पतिले ज्यान गुमाएको ६ महिनामै पत्‍नी सुस्मिताले बीमाको ठूलो रकम पाउने थाहा पाएपछि ससुरा र नन्द मिलेर (भिडियो हेर्नुहोस)
हेटौंडा उपमहानगरपालिका ४ सूर्य चोक नजिकै भएको ह,त्या प्रकरणमा प्रहरीले मृत,कका ससुरा र नन्दलाई नियन्त्रणमा
हेटौंडा उपमहानगरपालिका ४ सूर्य चोक नजिकै भएको ह,त्या प्रकरणमा प्रहरीले मृत,कका ससुरा र नन्दलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । असार २ गते बिहान ७ बजे २२ वर्षीय सुस्मिता थापा आफ्नै घरको भान्सा कोठामा मृ,त फेला परेकी थिइन् । अनुसन्धानका लागि थापाका ५८ वर्षीय ससुरा प्रकाश थापा र २३ वर्षीय नन्द सीता थापालाई ज्यान सम्बन्धी कसुर अभियोगमा नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले बताएको छ । घरमै मृ,त अवस्थामा भेटिएकी सुस्मिता थापाको ह,त्या आ,शंका गरिएको छ। तीन दिनअघि घरको भान्छा कोठामा वी,भत्स अवस्थामा भेटिएको सुस्मिताको श,वको अनुसन्धान गर्ने क्रममा ह,त्या देखिन आएको छ।
गत मंगलबार बिहान सुस्मिताको श,व भान्छामा भेटिएको थियो। मृतक थापाको टाउकोमा ग,म्भीर चो,ट पुगेको घट,नास्थलमा पुगेका स्थानीयबासीले बताएका छन्। मकवानपुर प्रहरीले उक्त घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। सुस्मिता थापाका ससुरा र नन्दको भूमिका शं,कास्पद देखिएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धानका लागि बिहिबार उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। घरमै रहेका ससुरा र नन्दले घटनाबारे थाहा नभएको बताएका थिए। तर सुस्मिताको श,व भान्छामा अवस्थामा भेटिनुको आशं,कामा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। भिडियो हेर्नुहोस
रुपन्देही, २४ साउन- यहाँ कार दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । रोहिणी गाउँपालिका–४ छिपागढमा
बच्चालाई खोलामा फाल्छु भन्दै आमा पुगिन् वडा कार्यालय, गरियो उद्धार
पोखरामा एक आमाले आफ्नै डेढ महिने शिशुलाई पालन पोषण गर्न नसक्ने भन्दै खोलामा फाल्ने बताएपछि
सामाजिक विकास कार्यालयको बार्षिक समिक्षामा जे देखियो
विजय रावत जुम्ला । सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको समिक्षा सम्पन्न भएको छ । कार्यालयले आर्थिक
बन्दाबन्दीको समयमा पनि सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं ६ अमारेमा तुरतुरे खानेपानी आयोजना तथा न्यौपानेटारमा निगौली